​यस्तो छ तामाको औठी लगाउनुको फाइदा
तामा एक धातु हो । तामाको प्रयोग परापूर्वकालदेखि चल्दै आएको छ । सुन, चाँदी, पित्तल र तामा सबैको छुटै महत्व हुन्छ । हामी तामाबाट बनेको धेरै सामानको प्रयाग गर्छौ । तामाको भाडामा पानी राख्दा पानीमा भएको सबै किटाणु मार्ने भएकाले पानी स्वच्छ मानिन्छ ।
त्यस्तै तामाको औँठी लागाउनुको पनि धेरै फाइदा छ । जान्नुहोस्ः
१. रिसको नियन्त्रण गर्न
तामाको औठीले शरिरको गर्मी कम गर्छ । यसलाई लगाउँदा शारिरीक र मानसिक तनाव कम गर्छ । यसको साथले रिसको नियन्त्रण गर्छ । यो औठीले तन र मनलाई शान्त राख्न मद्धत गर्छ ।
२ पेटको समस्याको समाधान
आजभोलि पेटको समस्याबाट पीडित धेरै व्यक्ति भेटिन्छ । तामाको औठीले पेटसम्वन्धि सम्पूर्ण समस्याको समाधान हुन्छ । पेट दुख्ने, पाचन प्रकृयामा समस्या र ग्याष्ट्रिक जस्ता समस्याको लागि एकदमै फाइदाजनक मानिएको छ ।
३. नङ तथा छाला स्वस्थ्य बन्छ
जो उच्च रक्तचापले पीडित छ त्यस्ता व्यक्तिलाई तामाको औठी एकदमै हितकारी हुन्छ । तामाको औठीले रक्तचापलाई नियन्त्रण गर्दछ ।
५. रोगप्रतिरोधात्क क्षमता मजबूत बनाउन
६. व्लड सर्कुलेसन ठिक राख्छ